HomeGUUDMaanta taariikhda: 4 Oktoobar 1872 Jidka tareenka ee Haydarpasa-Izmit
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş GUUD, TURKEY, Maanta taariikhda 0
4 Oktoobar 1860 Constanta-Chernova (Boğazköy) ayaa la dhisay. Koorsadu waxay bilowday. (64,4 km.)
4 Oktoobar 1872 Haydarpasa-Tuzla, qaybta koowaad ee tareenka Haydarpasa-Izmit, ayaa lagu soo gabagabeeyay 14 bishii waxaana loo furay xaflad xafladeed.
4 Oktoobar 1888 Deutsche Bank, oo ay hoggaamisay Georgevon Siemens, ayaa heshay mudnaan ay ku ballaarinayso kana shaqeyneyso Khidarpaşa-Izmit Line ilaa Ankara. Xaqiiqda heshiisku wuxuu ahaa 99 sanadihii iyo dhismihii wuxuu ahaa 3 sano. Deutsche Bank waxay soo iibsatay haydarpaşa-Izmit oo loogu talagalay 6 million francs. Heshiiska dhimista waxaa saxiixay wasiirka Nafia Pasha Zihni Pasha iyo Dr. Alfred Kuala oo ah madaxa maamulka Stutgard-vvürtembergissche Vereinsbank. Taariikhda go'aanka heshiiska dhiman wuxuu ahaa 30 September 1888.
4 Oktoobar 1971 Khadka Pehlivankoy-Edirne-Kapıkule ayaa la furay, lana furay Istanbul-Edirne ee 229 km. xiriir toos ah la leh Bulgaariya. Dhismaha xariiqan waxay ka bilaabantey 1968.
4 October 2005 Golaha Dowladdu wuxuu joojiyay fulinta go'aanka Guddiga Qorshaha Sare, kaas oo wax ka beddelay Nidaamka Diiwaangelinta Dalabka ee Maqnaanshaha ee TDD iyo Xaaladda Waaweyn ee TCDD Enterprise.
Maanta Taariikhda: 10 September 1870 Diyaargarow horudhac ah oo ka socda tareenka Haydarpasa-Izmit ayaa bilowday. 10 / 09 / 2012 10 September 1870 Diyaargarow horudhac ah oo ka socda tareenka Haydarpasa-Izmit ayaa bilaabmay.
Maanta Taariikhda: 10 September 1870 Diyaargarow horudhac ah oo ka socda tareenka Haydarpasa-Izmit ayaa bilowday. 10 / 09 / 2015 Maanta Taariikhda 10 September 1870 Dhoofinta hore ee tareenka Haydarpasa-Izmit ayaa bilowday.
Maanta taariikhda: 10 September 1870 Tareenka Haydarpasa-Izmit ... 10 / 09 / 2016 Maanta Taariikhda 10 September 1870 Dhoofinta hore ee tareenka Haydarpasa-Izmit ayaa bilowday.
Maanta taariikhda: 10 September 1870 Tareenka Haydarpasa-Izmit ... 10 / 09 / 2017 Maanta Taariikhda 10 September 1870 Dhoofinta hore ee tareenka Haydarpasa-Izmit ayaa bilowday.
Maanta taariikhda: 11 Oktoobar 1872 1 million 980 kun bond bondus ee tareenada Rumeli ... 11 / 10 / 2012 11 Oktoobar 1872 1 980 Million 1 kun oo 230 million XNUMX kun bond bondus ee tareenada Rumeli ayaa lagu iibiyey. Dhismaha dhismooyinka Skopje-Mitrovica iyo Tarnova-Yambol ayaa bilaabmay.
Maanta taariikhda: 10 September 1870 Tareenka Haydarpasa-Izmit ...
Maanta taariikhda: 11 Oktoobar 1872 1 million 980 kun bond bondus ee tareenada Rumeli ...
Maanta taariikhda: 11 Oktoobar 1872 1 980 million XNUMX kun oo gunno ah oo la siinayo tareennada Rumeli
Maanta taariikhda: 7 September 1871 Gaadiidka gawaarida ee Haydarpasa iyo Izmir ...
Maanta taariikhda: 7 September 1871 Haydarpasa-Izmir